Beeraleyda Timirta Puntland iyo Warbixinada Radio Daljir (sawiro) – Radio Daljir
Beeraleyda Timirta Puntland iyo Warbixinada Radio Daljir (sawiro)
Luulyo 28, 2018 8:13 g 0
Warbixintu waxa aan dabagali doonaa ballanqaadka beeroleyda timirta Puntland oo ballanqaadaya in ay haqab tiri karaan baahida timireed ee gobolka waqtiga dhow iyo tan Soomaaliya oo dhan waqtiga fog.
Waxa aan sidoo kale shacabka iyo maamulka Puntland la qaybsan doonaa baahida aqooneed iyo midda qalab ee haysata beeraleyda gobolka. Waxaan kale oo dhegaystayaasha Daljir iyo maamulka Puntland u iftiimin doona gubashada sii siyaadeysa ee beeraha timirta ee gobolada Bari iyo Gardafu iyo gacan-ka-geysashada sidii looga hortagi lahaa gubashada beeraha, dhan aqooneed iyo dhan qalab.
Warbixintan waxaa labadaas gobol nooga soo diyaariyey Xasan Heykal. Haddana aan idin la qaybsano masawiro hordhac u ah warbixinada Beeraleyda Timirta Puntland.
Maqaalo Kale 248 Wararka 17774